Indawo epholileyo enemibono emangalisayo kunye nokufikelela emlanjeni
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguDavid
Indlu yestudiyo ekhethekileyo, elunxwemeni loMlambo iWharfe eneembono ezingaphazamisekiyo zeDales kunye nokuhla komlambo. Ibonelela ngamava awodwa ngokwenene kwiPaki yeSizwe yaseYorkshire Dales kumgama olula wokuhamba weGrassington kunye nezinto eziluncedo zalapha ekhaya.
Kukho indawo yasekhitshini enecombi-imicrowave, ifriji, iketile kunye netoaster ukulungiselela ukutya okulula kunye neziselo. Isidlo sakusasa selizwekazi / iibhaps ezishushu zakusasa zinokuziswa emnyango wakho ngolungiselelo.
I-Sett ibonelela ngendawo yokuhlala efudumeleyo, yabucala, evulekileyo yokuhlala enegumbi lokuhlambela le-ensuite. Isibhakabhaka phezu kwebhedi sikuvumela ukuba ujonge iinkwenkwezi njengoko ulala kumandlalo womqhaphu waseYiputa. (Iibhedi ezimbini zabantu abangatshatanga ziyafumaneka xa ziceliwe). Ububanzi obugcweleyo obuphindwe kabini obumenyezelayo obungaphambili bubonelela ngombono ongaphazamisekiyo weendawo zakudala zaseDales, umhlaba wamandulo wemithi kunye nomlambo.
Indawo egqibeleleyo apho unokuphonononga iiDales zaseYorkshire okanye uphumle kwindawo yakho yokufunda, ukubukela izilwanyana zasendle okanye umabonwakude omkhulu wescreen esicaba ngokufikelela ngasese kwiSky kunye neWifi.
I-Sett inendawo yayo yokuhlala engasese enokufikelela ngokuthe ngqo kuMlambo iWharfe.
Kubakhweli beebhayisikile kukho ivenkile etshixwayo.
I-Sett ikwiNdlela yoMjikelo weRoses kwaye ibekwe kufutshane neDalesway kunye nezinye iindlela ezintle zokuhamba kunye neebhayisekile ezifikeleleka ngqo ukusuka emnyango. Siyavuya ukucebisa iindlela zokuhamba ezijikelezayo ezinobude obahlukeneyo kunye nobunzima.
Kukho inani lee-pubs, iikhefi kunye neevenkile kumgama wokuhamba. I-Skipton, i-Ilkley, iMalham, iBolton Abbey zonke zikumgama omfutshane wokuhamba kunye nezinye iindawo eziphawulweyo zaseYorkshire ezinomgama omangalisayo.
UDavid noBrettle bafuna ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kuphumla kangangoko kunokwenzeka. Sihlala kwindawo kwaye sikho ukuze siphendule nayiphi na imibuzo okanye iimfuno onokuthi ube nazo ngelixa ukhumbula ubumfihlo bakho.
Ekufikeni kwakho uya kudibana kwaye unikwe utyelelo olukhawulezayo lweSet. Emva koko ukufikelela kwi-Sett kunokuzuzwa ngendlela eya kwicala le-50 Badgergate -ebaleka ukusuka ekupheleni kweterrasi yonke indlela eya kwi-balcony ye-Sett. Le ndlela ikhanya kakuhle kwaye ikwenza ukwazi ukuza kwaye uhambe ngokuthanda kwakho . Ukuba nangaliphi na ixesha uziva unokonwaba ngakumbi usebenzisa indlu yethu ukufikelela, siyavuya ukulungiselela oku. Nawuphi na umcimbi xa uhamba nceda uhambe ngendlu yethu.
UDavid noBrettle bafuna ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kuphumla kangangoko kunokwenzeka. Sihlala kwindawo kwaye sikho ukuze siphendule nayiphi na imibuzo okanye iimfuno onokut…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Threshfield